12 sano kadib waxaan ogaan doonaa hadii ay suurta gashay la dagaalanka isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Isbedelka Cimilada, Saadaalin
Saamaynta isbedelka cimilada ayaa laga dareemay meeraha oo dhan. In kasta oo tallaabooyin la qaadayo si loo wajaho saameynteeda, xaqiiqadu waxay tahay in qiiqa gaaska lagu sii daayo uu kordhay, taas awgeed, celceliska heerkulka adduunka ayaa sii kordhaya, dhalaalkiisuna waa sii kordhayaa.
Waxaan jabineynay rikoorrada illaa soddon sano, laakiin shantii ugu dambeysay isbeddelka cimilada waa la dadajiyay. Wax walba, ma sugi doonno waqti dheer si aan u aragno haddii Heshiiska Paris uu caawin doono iyo in kale: saynisyahan Ricardo Anadón dijo in tobanka sano ee soo socda aan ogaan doono.
Waxaan inta badan ka hadalnaa isbeddelka cimilada sidii inay ahayd dhacdo hadda uun dhaceysa, laakiin runtu waxay tahay in kuwo badan oo ka horreeyay ay jireen ayna mustaqbalka sii jiri doonaan. Waxa keliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah in tan hadda jirta ay aadamuhu uga sii daraan. Xaalufinta dhirta, maamul xumida kheyraadka dabiiciga, wasakheynta, ... waxaas oo dhami waxay dardar galinayaan dhalaalista, hanjabaada beeraha, waxayna qatar galinayaan malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida.
Haddii aan ka hadalno qiiqa kaarboon laba ogsaydhka, 400 qaybood halkii milyan ayaa lagu dhaafey jawiga, markay ahayd waqtiyadii warshadaha kahor waxay ahayd 280 ppm. 12.000 sano ka hor, maalmaha qabow, isku ururinta gaasasku waxay ahaayeen 180 qaybood halkii milyan; Markay kor u kacday ilaa 280 ppm, heerkulka meeraha ayaa ku kordhay ilaa toddobo digrii, ayuu sharaxay Anadón.
In kasta oo wax waliba jiraan, haddana isticmaalka dhuxusha, saliidda iyo gaaska ayaa sii kordhaya. Waxaan si aad ah uga sii baraarugeynaa inaanan sidan ku sii socon karin, laakiin xilligan la joogo, nasiib daro, tamarta la cusboonaysiin karo ma laha mudnaan ay mudan yihiin. Duckling wuxuu u maleynayaa in »waxaan u soconaa xaaladdii ugu xumeyd ee ugu macquulsaneyd, ama halkii, aan ugu dhaqaaqno xaaladdii ugu xumeyd ee kuwa la fikiray".
Mustaqbalka muxuu hayaa? Ma ogaan karno hubaal, laakiin haddii aan sidan ku sii socono, waxaa hubaal ah inaan dhibaatooyin badan la kulmi doonno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » 12 sano gudahood waan ogaan doonaa hadii aan awood u yeelanay la dagaalanka isbedelka cimilada